5 Most risingakanganwiki Natural Reserves In Europe | Save A Train
musha > Chitima Kufamba Switzerland > 5 Most risingakanganwiki Natural Reserves In Europe
Pamusoro pegomo makomo, mipata inowanda, mapopoma, munyanza, uye mhuka dzakasiyana dzemusango, Imba yeEurope yepasi rose isingakanganwiki zvisikwa zvisikwa. Kushandisa nyika dzakakura dzakasvibira dzinotumbuka munguva yechirimo, 5 yenzvimbo dzakanakisa dzekuchengetedza zvisikwa muEurope dzakachengetedzwa mapaki emunyika anogamuchira vafambi vanobva kumativi ese epasi. Kana iwe uchishuva kufamba musango, kufamba, kana kunakidzwa nenzvimbo tsvene yezvisikwa, ipapo uchazoda vedu 5 pamusoro zvisingakanganwiki zvisikwa zvisikwa muEurope.
1. Belluno Dolomite Nzvimbo Inochengeterwa MuItaly
Belluno zvisikwa zvakachengetedzwa yakavambwa mu 1990 kuchengetedza hunaku hwesango hwemaDolomites. Inowanikwa kumucheto kweDolomite mu kuchamhembe kweItaly, Belluno yakasikwa paki inoyevedza munguva yechirimo. Zvikomo zvakasvibirira uye nhongonya dzemakomo dzinoyevedza zvakafukidzwa nemakapeti emaruva. Pasinei nehutano hwako, iwe uchave nenguva yakanaka uchiongorora ichi chakachengeterwa zvisikwa, sezvo paine nzira dzakasiyana siyana. Belluno yemhando yekuchengetera muEurope yakakwana kune vese vatangi uye vane ruzivo vafambi.
32000 mahekita emiti isingawanzo uye pamusoro pegomo, dura renharaunda reBelluno rinotambanuka kubva kuCismon mupata kuenda kuPiave mupata. Kusiyana kwakapfuma kuri muzvinyama uye nemagariro nekuda kwemisha mizhinji iri munzvimbo yemupata wePiave. Saka paunoshanyira Belluno zvisikwa zvinochengeterwa muEurope, iwe unowana mukana wekuti uve nerwendo rukuru rwekutsvagisa mashura echisikigo uye nemagariro etsika.
Nzira Yokusvika Nayo Belluno Natural Reserve?
Belluno yakasikwa yakachengetwa iri pasi pe 3 maawa 'chitima kufamba kubva kuVenice.
Ndekupi Kwandinogona Kugara Kwatiri Belluno Park?
Kune dzimba zhinji dzemakomo, B&B, uye mahotera.
Mazuva Mangani Ini Andinofanira Kupedza MuBelluno Nature Reserve?
Belluno Dolomites chengetedzo ndeimwe yeakakura uye 5 akawanda asingakanganwiki zvisikwa zvisikwa muEurope. wo, Belluno ipaki yakanaka yepanyama, saka unofanirwa kushandisa zvirinani 3 mazuva vachiongorora uye kunakidzwa nemadhamu, makomo, uye kubwinya kwechisikigo.
2. Hohe Tauern Nzvimbo Yekuchengetera MuAustria
Nzvimbo hombe yekuchengetera zvisikwa muEuropean Alps iri muAustria. Hohe Tauern yekuchengetedza iri kumba ku 10,000 mhuka marudzi, 1,800 zvirimwa, uye Grossglockner, Yepamusoro soro yeAustria, pa 4,798 metres pamusoro pegungwa. Iyi yepamusoro yepamusoro inogara pakati 200 zvimwe zvikwiriso, green fauna, madhamu gomo, uye nzizi dzemvura.
Hohe Tauern zvisikwa zvekuchengetera mipata izere neakanaka magirazi echando, yekare uye maonero anoonekwa mumusha, kapeti yemaruva, nemasango. Iyi paki yakasikwa yeEurope inzvimbo tsvene kuvashanyi vayo uye vagari vane rombo rakanaka mumatunhu akapoteredza. Zvikuru sei, Umbalfalle Nature Trail yemapopoma uye rwizi, kwaunozoona zvimwe zve mapopoma anoshamisa kwazvo mu Europe.
Nzira Yekusvika Hohe Tauern Natural Reserve?
Hohe Tauern zvisikwa zvekuchengetedza zviri padyo neguta reMallnitz. Vienna kuenda kuHohe Tauern nechitima ndeye 5 maawa.
Ndekupi Kwandinogona Kugara Kwatiri Hohe Tauern Park?
Mallnitz iguta rine mukurumbira muHohe Tauern ine sarudzo dzakawanda dzekugara.
Mazuva Mangani Ini Andinofanira Kupedza Mune Hohe Tauern?
Kune akawanda akasiyana kukwira nzira muHohe Tauern kuchengetedza nzvimbo, saka kuronga a 4-5 rwendo rwemazuva rwakanyanya kunaka. Nenzira iyi unogona kutsvaga paki uye padyo nemataundi.
3. Ecrins Nature Reserve MuFrance
Sezvo iwe uchikwira kuburikidza neichi chinoshamisa chisikwa chengetedzo muFrench Alps, iva nechokwadi chekucherechedza makondo, stoats, willow grouse, uye nedzimwe mhuka zhinji dzesango dzinoiti musha. Iyi inoshamisa sosi muEuropean Alps ndeimwe yeakanaka mapaki emunyika iwe uchave nemukana wekuwana.
Mazaya echando, makomo marefu, alpine green land, uye mhepo yakachena, Ecrins 'inoyevedza uye nzvimbo inotora mweya wako.
Nzira Yekusvika Kune Iyo Ecrins Nzvimbo Yekuchengetedza?
Iwe unogona kusvika kune Ecrins yenyika paki kubva chero kupi muFrance. Iyo yekuchengetedza zvisikwa iri padyo nemuganhu weFrance neItari. Icho chiri pedyo neLyon, muMarseilles, uye Geneva muSwitzerland, saka chitima kufamba kuyambuka France kuna Ecrins chinhu chikuru kuita.
Ndokupi Kwandinogona Kugara Kwakatenderedza Ecrins Park?
Kubva kumahotera emhuri-ane hushamwari kuenda kuzororo rendi, pane misiyano yenzvimbo dzekugara dzakakomberedza nzvimbo yeEcrins.
Mazuva Mangani Ini Andinofanira Kupedza MuEcrins?
Zviri kwauri. Kunyangwe iwe uchisarudza kuzvitsaurira 7 mazuva kana kuenda kuzororo revhiki, uchave nerwendo rwekurota.
4. Saxon Germany Uye Bohemian Switzerland Nzvimbo Inochengeterwa MuCzech Republic
Iyo inoshamisa zvisikwa chengetedzo Saxon Switzerland inotambanuka kubva kuGerman kuenda kuCzech Republic. Elbe limestone makomo uye inozivikanwa pasi rese Pravcicka brana dombo kuumbwa zvakatoratidza "Shumba, Muroyi, uye muwardrobe ”bhaisikopo. Iyi inoshamisa inochengeterwa zvisikwa ndeimwe yenzvimbo dzisingakanganwiki dzinochengeterwa zvinhu muEurope ine akawanda maapo Instagram-ane hushamwari maonero kumusoro kwecanyon.
Zhizha kana chando, nzira dzakasvibirira, uye nzira dzinoiswa mucherechedzo mushe uye nyore kusiyanisa muhuswa hwakasvibira mumativi ese maviri ecanyon nerwizi. Saxon Germany, kana Bohemian Switzerland, zvinoenderana nerwendo rwako rwekutanga kana kwekupedzisira kuenda, inova yakanaka oasis uye yekukwira paradhiso yevafambi vanobva kutenderera pasirese.
Maitiro Ekuenda KuSaxon Germany Kana Bohemian Switzerland Natural Reserves?
Unogona kusvika kune ino inoshamisa zvisikwa zvinochengeterwa mukati Europe nerwendo rwezuva kubva kuPrague kana Dresden.
Ndekupi Kwandinogona Kugara Kwakatenderedza Iyo National Park?
Sezvo nzvimbo yekuchengetedza iri pamuganhu weGerman neCzech Republic, sarudzo dzekugara hadziperi.
Mazuva Mangani Ini Andinofanira Kupedza MuBohemian Switzerland?
Rwendo-rwezuva ndeyechokwadi mhedzisiro, uye kana uchigona kupedza mazuva mashoma, ipapo zvinokurudzirwa zvikuru.
5. Ordesa Uye Monte Perdido Nzvimbo Inochengeterwa MuFrance
Inowanikwa pakati nepakati pakati peSpain neFrance, Ordesa neMount Perdido ndeimwe yezvinonyanya kushomeka zvisikwa muEurope. Kunyangwe iri kudivi reFrance nemusangano we 3,355 M. iro zita regomo reMonte Perdido rakatambira zita raro nekuti raisaonekwa kubva kudivi reFrance remuganhu.
Inoshamisa Ordesa zvese zviri UNESCO World Heritage saiti muEurope uye biosphere kuchengetedza kwemhuka dzesango nemhuka. Iko kumusha kumupata weOrdesa, mapopoma, mhuka dzakasiyana dzemusango, kusanganisira gondo regoridhe, uye 32 mhando yezvipuka. Sezvaunokwira uye kuyemura maonero emakomo ePyrenees, iva nechokwadi chekutarisa kunze kweMarmot, Hawks, nemazizi, naizvo. saka, Ordesa neMonte Perdido zvisikwa zvinochengeterwa inzvimbo inoshamisa uye inzvimbo muEurope kune chero mhando yemufambi.
From 3 maawa ’kusvika 2 mazuva 'rwendo rwekufamba, Ordesa inopa nzira dzakasiyana dzekukwira, yezvikamu zvakasiyana zvehutano.
Maitiro Ekuenda Kune Iyo Ordesa Nzvimbo Reserve?
Ordesa neMonte Perdido kuchengetedza kunosvikika kubva kuFrance neSpain. Kubva kuZaragosa kuenda Torla-Ordesa ndezve 5 maawa kana 3 Maawa kubva kuBarcelona. Kana iwe uri kuenda kuFrance, ipapo Toulouse iri 7 maawa kure.
Ndekupi Kwandinogona Kugara Kwakatenderedza Ordesa Park?
Iwe unogona kuwana yakakura pekugara sarudzo muTorla, kubva kuimba dzevaeni nemahotera.
Mazuva Mangani Ini Andinofanira Kupedza Mune Ordesa Nzvimbo Reserve?
Ordesa uye Mount Perdido vanozivikanwawo seYosemite park yeEurope. saka, unofanira kugara kanenge 3 mazuva, kusanganisira kukwira uye nguva yekuzorora.
5 yenzvimbo dzisingakanganwiki dzinochengeterwa zvisikwa muEurope dzinopa maonero epiki uye nzira dzekukwira kuenda kumatopoma anoshamisa epasirese. saka, kukwira mhiri kwemipata yakasvibira, kuyemura minda yemaruva uye nhongonya dzemakomo ndicho chipo chikuru kwazvo chaunogona kuzvipa. Hapana chimwe chinozorodza uye chinokurudzira kupfuura zvakasikwa zviri munyika dzeEurope dzinoshamisa kwazvo.
pano pa Save A Train, tichafara kukubatsira kuronga zororo rako kune zvisikwa zvisikwa zvesarudzo yako nechitima.
Unoda here kupinza yedu blog positi "5 Zvizhinji zvisingakanganwike Zvisikwa muEurope" kupinda yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://embed.ly/code?url =Https://www.saveatrain.com/blog/unforgettable-na .......-reserves-europe/ ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, you will find our most popular train routes – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml.
Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kushandura / ja kuti / ja kana / of uye mimwe mitauro.